Malunga nathi -Staba Electric Co, Ltd
IsiGaba esithathu seMveliso yeeVolvo zoVavanyo lweeVenkile
Isigaba esinye seServo yeeVolthi zoVavanyo lweeVolthi
Ukusuka kwi-2017, uStaba uqalile ukwenza uphando kunye nophuhliso kwiimveliso zetshaja yePD GaN.
Itekhnoloji ye-GaN inguquko kumzi mveliso wetshaja, le tshaja ingasebenzisa isiguquli esincinci kunye nezinye izinto ezinciphisayo, ngaloo ndlela kuncitshiswe ngokufanelekileyo ubungakanani beshaja yeGaN kunye nokuveliswa kobushushu, kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle.
Ngeli xesha gcina ukwazisa izixhobo zemveliso ezizenzekelayo kwiminyaka yakutshanje, kungekuphela nje ukunciphisa iindleko zomsebenzi, ukwandisa imveliso, kodwa kunye nokwandisa ukhuphiswano lwexabiso lweStaba PD, kunye nokuphucula umgangatho kwinqanaba eliphezulu ngobuchwephesha bokuzenzekelayo; ukwazisa inkqubo yovavanyo oluzenzekelayo lwamva nje kunye nenkqubo yokuguga, ukunciphisa iindleko zabasebenzi ngaxeshanye, ukuphucula umgangatho weshaja ye-PD kumgangatho wamazwe aphesheya, inqanaba lokusilela kwemveliso lifikelela kwi-PPM.
Ngexesha lophuhliso, uStaba uhlawula kakhulu ukuqokelelwa kwamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nokusekwa kwenkqubo yolawulo lweshishini. I-Staba lishishini lokuqala kwingingqi yethu ukupasisa ukuvunywa kwe-IPMS ye-GB / T29490-2013, ephethe amalungelo awodwa omenzi wechiza ama-4 e-United States nakwi-European Union, nangaphezulu kwe-58 yasekuqaleni yase-China yokuvelisa amalungelo awodwa omenzi wechiza kunye nemodeli yokusetyenziswa.
I-Staba ivunyiwe / iphinde yamkelwa njengeshishini lobuchwephesha obuphezulu kuzwelonke amaxesha amathathu alandelelanayo, sinamaziko amabini obuchwephesha: Iphondo laseGuangdong iZiko lobuGcisa boMbane oBunjineli, kunye neZhongshan City Power Product Technology Technology Centre. Ukusukela kusuku lokuqala lokusekwa kwayo, inkqubo yesoftware ye-ERP kunye nenkqubo yolawulo ye-ISO9001 ziye zaphunyezwa kuzo zonke iinkalo zolawulo lwenkampani, kuqinisekisa ukusebenza ngokutyibilikayo nangokufanelekileyo kwenkqubo. Okwangoku sinabasebenzi abangama-340, abangama-33 kubo bakwinkqubo ye-R & D kwaye abangama-38 yeyabaphathi benkqubo. Kwangelo xesha, sinentsebenziswano enkulu kunye nentsebenziswano yokubonisana namaziko ophando amaninzi kunye neengcali kolu shishino, sizama ukwenza iimveliso zethu, iinkonzo kunye netekhnoloji phambili kwicandelo.
I-Staba ingathanda ukwenza i-win-win value kunye nabathengi ngomgangatho ophezulu, amaxabiso okhuphiswano, impendulo ekhawulezileyo yokukhokela kunye nenkxaso.
Ukusebenza ngobuchule Eyona nzuzo ihlala ihleli okanye imodeli yokuphila emhlabeni
Ukuyilwa kwezinto ezintsha isiseko senkqubela phambili yinkxalabo yoluntu kunye nokwoneliseka kwabathengi
Umthengi wokuqala Intliziyo enombulelo yeyona nto ibaluleke kakhulu, ukukhula kwethu akunakwahlulwa kubathengi